कसले जोगायो सुन तस्कर भुसाल ? – मुलधार न्युज
Home > समाचार > कसले जोगायो सुन तस्कर भुसाल ?
कसले जोगायो सुन तस्कर भुसाल ?
१६ आश्विन २०७५, मंगलवार १४:१२
काठमाडौं-गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सुन तस्करी माथिको अनुसन्धान अझै नरोकिएको बताइरहँदा दुबईबाट अवैध रूपमा सुन तस्करी गर्ने गिरोह सक्रिय छ।
सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याको बिषयमा गठित उच्च स्तरीय सरकारी समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अनुसन्धानको घेरामा उच्च तहका व्यक्तिहरू पनि आएको गृहमन्त्री थापाले अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलबाट भने सुन बाहिरिने क्रम रोकिएको छैन । गएको दुई महिनामा बिमानस्थलबाट बाहिरीने क्रममा १५ केजी बराबरा सुन बरामद भैसकेको छ ।
उता नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआईबीले २० महिना अगाडी बरामद गरेको ३३ किलो सुन तस्करका गिरोहले भने उन्मुक्ति पाउँदै आएको खुलासा भएको छ ।
दुबईबाट नेपालमा सुन तस्करी गर्दै आएको तथा ३३ किलो सुन तस्करीका नाईके रोशन भुसालको समूहले रहस्यमय रूपमा उन्मुक्ति पाएको स्रोतले बतायो ।
भुसाललाई हरिशरण खड्काले सहयोग गर्दै आएका छन् । खड्कालाई ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको थियो ।
शुरूमा एसएसपी श्याम खत्रीलाई तत्कालीन सीआइबी प्रमुख नवराज सिलवालले नै सुन तस्करीमा पक्राउ गर्दा समेत भुसालको संलग्नता बाहिर आएको थियो ।
अहिले दुबईमा रहेका सुन तस्करीका नाइके भुसाललाई किन जोगाइयो रु भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ । भुसालसँग पूर्वआईजीपी प्रकाश अर्यालको निरन्तर सम्पर्क रहेको प्रमाण समेत भेटिएको थियो।
भुसालले भने सुन तस्करी गरेर पचासौं करोडको सम्पत्ती जोडेका छन् । तर उनको उक्त अवैध सम्पत्ति बारे सिआईबीले थप अनुसन्धान नगरेपछि तत्कालिन प्रहरीका आईजी अर्याल र भूसालको सम्बन्धका बारेमा खोजी भएको थियो ।
उनले दुबईमा शंकास्पद रूपमा ९ वटा कम्पनीहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । हाल दुबईमै रहेका भुसालको काठमाडौंका ७ वटा बैंकमा खाता छन्।
उनले एउटै बैंकमा सन् २०१६ मा मात्रै १० करोड ५७ लाखसम्म जम्मा गरेको तत्कालिन सिआईबीका डिआईजी सिलवालले पत्ता लगाएका थिए ।
त्यसअघि २०१७ मा ७ करोड २६ लाख रूपैयाँ जम्मा गरेको पनि भेटिएको थियो । भुसालले सन् २००६ मा दुबई जानुभन्दा अगाडि केही समय जग्गाको कारोबार गरेका थिए । त्यसबाट केही आम्दानी भएपछि दुबई हानिएका उनी उतैबाट सुनको धन्दामा सामेल भएको प्रहरीको दाबी छ ।
दुबईमा उनको याक एण्ड ज्वेलर्स ट्रेडिङ, एस्टोरीया होटल र याक एण्ड यति नेप्लीज कुजिन रेष्टुरेन्टलगायत छन् । उनले २०१६ मा मेगा बैंकमा जम्मा गरेको पाँच करोड ५५ लाख रूपैंयाको स्रोत शंकास्पद रहेको रिपोर्ट प्रहरीले तयार पारेको छ थियो ।
तर सिआईबीमा पुष्कर कार्की छँदा प्रकाश अर्यालको दबाबमा उनलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धान गर्न नदिई उन्मुक्ति दिलाईएको स्रोतको दाबी छ ।
२१ पुस २०७३ मा त्रिभुवन अन्तर्र्रािष्ट्रय विमानस्थलको भन्सारबाटै बाहिरिएको ३३ किलो अवैध सुन सिआईबीले बरामत गरेपछि खड्का र भुसाल सुन तस्करका गिरोह रहेको खुलेको थियो।जनप्रहार साप्ताहिक
पौने ९ लाखसहित जुवाको खालबाट ३ जना पक्राउ
३५ एसएसपीको सरुवा (सूचीसहित)
प्रधानसेनापतिसँग अमेरिकी र जर्मनीका राजदुतद्धारा भेटवार्ता
पारसको टिम चितवन राइनोजको लगातार दोस्रो जित
यी हुन् सशस्त्रको उत्कृष्ट कोटामा छानिएका
उपत्यकाका ६ पर्यटकीय क्षेत्रमा आजदेखि वाइफाइन फ्रि
सरकारद्धारा नेपाली सेनाका दुई जना उपरथीमा बढुवा
हतकडीसहित फरार रहेका अभियुक्त पक्राउ
भारतीय बाटो प्रयोग गरेर नेपालको सुरक्षा
लुलियाका लागि घर छाड्दै सलमान खान
म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट काठमाडौंमा,राजधानीको सुरक्षाव्यवस्था कडा